पतिलाई आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य नै पार्ने गर्छन् यी ३ राशि भएका महिलाहरु « गोर्खाली खबर डटकम
विवाह पछि श्रीमान श्रीमती बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने धेरैको चासो हुने गर्छ। विवाह पछि केहिको सम्बन्ध जीवन भर टिक्ने गर्छ भने केहीको खासै सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन। सम्बन्ध टिक्ने र नटिक्नेमा श्रीमान श्रीमतीले एक-अर्का प्रति देखाउने जवाफदेहितामा भर पर्ने गर्छ।
यस राशि हुने महिलाहरु धेरैनै शान्त हुने गर्छन्। गम्भीर प्रकृतिका हुने हुँदा यस राशिका महिलाहरु कम बोल्ने गर्छन्। हरेक निर्णय गर्ने क्षमता हुने हुँदा आत्मनिर्भर पनि हुने गर्छन् मकर राशिका महिलाहरु। तर अरुको अगाडी कुनै पनि हालतमा नझुक्ने हुँदा आफ्नो पतिलाई आफ्नो अगाडी झुक्न वाध्य बनाउने गर्छन् भने आफ्नो पतिलाई राम्रोसंग नियन्त्रण गर्न मकर राशि भएका महिलाहरु खप्पिस हुन्छन्।
साँचो कुरा र तथ्यमा अडिक रहने बानि भएमा हुन्छन् मेष राशि हुने महिलाहरु। यस राशि हुने महिलाहरु साथै हरेकको विश्वास पनि सजिलै जित्ने क्षमताका पनि धनि हुने हुँदा सबैको प्रिय हुने गर्छन्। शान्त स्वभावका हुने भएता पनि आफ्नो निर्णयमा जिद्दी हुने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउने गर्छन् यस राशि हुने महिलाहरु।
यस राशि भएका महिलाहरुलाई रहस्यमयी मान्ने गरिन्छ। रिसाएको खण्डमा सजिलै सम्झाउन नसकिने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउँछन्। हरेक कार्य पूर्ण रुपले फत्ते गर्ने क्षमाता हुने र आत्मविश्वास पनि उच्च हुने हुँदा आफ्नो पति भन्दा हरेक कार्यमा अगाडी हुन्छन् यस राशि भएका महिलाहरु। जसको कारण पतिहरु झुक्न वाध्य हुन्छन्।
पतिलाई दबाएर राख्छन यी राशिहरुकन्या राशि : यो राशी भएका महिलाहरुमा श्रीमानलाई सजिलै काबुमा राख्ने क्षमता हुन्छ । यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन । आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,दण्ड, भेदको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन् ।
कर्कट राशि : यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन् । साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ । घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन् । श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन । कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन् ।सिंह राशि : यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन् । यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ ।
आज साउनको पहिलो सोमबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
भारत, पाकिस्तानलाई पछि पार्दै नेपाली सेना विश्व कै तेस्रो नम्बरमा ! शुभकामना तथा बधाई दिदै सेयर गरौं !!!
४७ बर्षिय सुन्दरी मलाइकाको हट अवतार, हेरौं तस्बिर